Dilaaga COVID 19 iyo Dabaaldegga Ciidda W/Q: Mustafe M Khayre
Dabaaldeggii si qurux badan buu u qabsoomay. Waxa ka qaybqaatay 200,000 oo qof oo kor u lulaya calanka Maraykanka iyo astaanta Philadelphia. Durbaannada, sacabka, heesaha, gaardiska, wax kasta oo maalintaa lagu weynayn karayey waa la sameeyey. Si kasta waa loo damaashaaday.
Warbaahintuna waxay markiiba u aqoonsatay maalin ka mid ah maalmihii ugu mudnaa Philadelphia.